सीके राउतको पार्टीले ३२ जिल्लामा चुनाव लड्ने - मनकामनापोष्ट
Written by मनकामनापोष्ट•	March 24, 2022• 10:17 am• ताजा अपडेट, मधेस प्रदेश, राजनीति, राष्ट्रिय
सीके राउतको पार्टीले ३२ जिल्लामा चुनाव लड्ने
काठमाडौँ,चैत्र १० गते । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण तथा बैठकले दिनहुँ जसो हुने दलहरू बस्न थालेका छन् । भने विभिन्न योजना बुन्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सक्रियता गराउने देखि जनतासम्म दलहरू पुग्न थालेका छन् । पहिलोपटक चुनावमा भाग लिन लागेको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि चुनाव केन्द्रित गतिविधि सुरु गरिसकेको छ ।
पार्टीले किसान आन्दोलन र माटो सङ्कलनको अभियान सँगसँगै चुनावी अभियानलाई पनि लैजाने गरी योजनाहरू बुनिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै माटो सङ्कलन यात्राका लागि गृह जिल्ला सप्तरी पुगेका डा. राउतले त्यहाँ कार्यकर्ता तथा जनतासँग भेटघाट गरेका थिए । जनमतले स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा निर्वाचनबाट जनताको राज ल्याउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र १० लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेलगायतका योजनालाई अघि सारेको छ ।